ဒဏ္ဍာရီ ထဲက ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ သတ္တဝါဆန်းတစ်မျိုး (သို့) သမန်းဝံပုလွေများအကြောင်း - Thutazone
ဒဏ္ဍာရီ ထဲက ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ သတ္တဝါဆန်းတစ်မျိုး (သို့) သမန်းဝံပုလွေများအကြောင်း
By ThutammPosted on August 30, 2017 August 30, 2017
Written By Dr.Aung
Werewolf ဆိုတာ ဒဏ္ဍာရီ ထဲက ကြောက်မက်ဖွယ်အကောင်းဆုံး သတ္တဝါဆန်းတွေထဲမှာ တစ်မျိုးအပါအဝင် ဖြစ်တာပါ။ သူတို့ဟာ အလွန်ကြီးမားတဲ့ လူတစ်ပိုင်း ဝံပုလွေတစ်ပိုင်း သတ္တဝါဆန်းဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ဒေါသကို ထိန်းချုပ်နိူင်စွမ်း နည်းပါးတဲ့ မျိုးနွယ်စုတစ်ခုပါ။ Werewolf တွေကို ပြင်သစ်, ဂျာမနီ အစရှိတဲ့ နိူင်ငံတွေအပြင် ကမ္ဘာ့နိူင်ငံအနှံ့အပြားမှာ တွေ့ရှိဖူးကြတယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုကြပေမယ့် Werewolf တွေဟာ ကျေးလက်အမေရိကန် ရိုးရာဒဏ္ဍာရီတွေက ဆင်းသက်လာတာဆိုပြီး အယုံအကြည် ရှိခဲ့ကြတာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်တွေက အမေရိကန်ရဲ့ Wisconsin ပြည်နယ်အတွင်း မှာ Werewolf တွေကို အမှတ်မထင် မြင်တွေ့ရဲ့သူတွေ အမြောက်အမြား ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီး မှတ်တမ်းအရ သိရှိနိူင်ပြီး ထိုဒေသဟာလည်း Werewolf တွေရဲ့ သမိုင်းစတင်ရာ မြေဖြစ်တယ်ဆိုပြီး အနောက်တိုင်းသားတွေက တစ်ထစ်ချယုံကြည် နေကြပါတယ်။
“Werewolf ဘယ်နှစ်မျိုး ရှိတာလဲ?”
– Shapeshifter Wolf (အသွင်ပြောင်း သမန်းဝံပုလွေ)
– Wolfman (လူတစ်ပိုင်း ဝံပုလွေတစ်ပိုင်း)
– True Werewolf (သမန်းဝံပုလွေ)
ဆိုပြီး ၃ မျိုးရှိပါတယ်။
(၁) အသွင်ပြောင်း သမန်းဝံပုလွေ
– အဆင့်အမြင့်ဆုံး အမျိုးနွယ်ပါ။ သူတို့တွေဟာ လူအသွင်ကနေ သမန်းဝံပုလွေ သို့ သမန်းဝံပုလွေကနေပြီး လူအဖြစ်ကို စိတ်ရှိတိုင်း ပြောင်းလဲနိူင်တဲ့ စွမ်းအင်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေပါ။ ဒါပေမယ့် အချို့အခြေအနေ တွေဖြစ်တဲ့ အလွန်အမင်း ပူဆွေးသောက ရောက်ခြင်း ဒေါသခြင်းများရှိပါက မိမိစိတ်ထဲကမပါပဲ အလိုလို သမန်းဝံပုလွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားနိူင်တဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ဒီ Shapeshifter Wolf အမျိုးအစားဟာ အခြားသူကို ကိုက်ခြင်းဖြင့် အသွင်ပြောင်း သမန်းဝံပုလွေတစ်ယောက် ဖြစ်မလာစေ နိူင်ကြောင်း သတိပြုရမှာပါ။
(၂) လူတစ်ပိုင်း ဝံပုလွေတစ်ပိုင်း
– သူတို့အမျိုးအစားကတော့ လူတစ်ပိုင်း ဝံပုလွေတစ်ပိုင်း mutant ဖြစ်နေတဲ့ ပုံစံပါ။ သူတို့ဟာ အများအားဖြင့် လူခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့် သူတို့မှာ အမွှေးအမျင် အလွန်ထူထပ်ပြီး အစွယ်တွေ, ခြေသည်းလက်သည်းတွေ ထွက်နေလေ့ရှိတာပါ။ သူတို့အမျိုးအစားကတော့ ကျိန်စာတိုက်ခံ ထားရတဲ့အမျိုးအစားပါ။ သူတို့ကတော့ လပြည့်ညရောက်မှသာ သမန်းဝံပုလွေအဖြစ် လုံးဝပြောင်းလဲသွားတာပါ။ အခြားနေ့ တွေမှာတော့ လူတစ်ပိုင်း ဝံပုလွေတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ ကိုယ်ယောင်ဖျောက် နေထိုင်လေ့ရှိတဲ့ အမျိုးအနွယ်တွေပါ။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ လူဖြစ်စဉ်ကအတိုင်း စိတ်ခံစားချက်တွေကို ဝံပုလွေအဖြစ် ပြောင်းသွားတဲ့ လပြည့်ညတွေမှာတောင် ထိန်းချုပ်နိူင်စွမ်း ရှိသူတွေပါ။ လပြည့်ညတွေမှာပဲ အသွင်ပြောင်းရာက အခြားညတွေအထိ ပြောင်းလဲမှု စိတ်လာမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး လုံးဝလူ့အသွင် ပြန်မပြောင်းတော့ပဲ လူဖြစ်စဉ်က ခံစားချက်တွေ တစ်ဖြေးဖြေးပျောက်ဆုံးသွားပြီး ခံစားချက်မဲ့တဲ့ သမန်းဝံပုလွေအဖြစ် ထာဝရပြောင်းလဲ သွားမယ့် အမျိုးအနွယ် တစ်ခုအဖြစ် သိနိူင်ပါတယ်။
– သူတို့က Shapeshifter Wolf မှ ဆင်းသက်လာသူ တွေပါ။ ရာဇဝင်အရ Shaftshifter Wolf အချို့ဟာ သူတို့ရဲ့ အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲနိူင်စွမ်းနဲ့ လူ့အသိစိတ်နှင့် ထိန်းချုပ်နိူင်မှု တွေကို ပျောက်ဆုံးစေတဲ့ ကျိန်စာတိုက်ခံရပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဆင့်ပွားဖြစ်ပေါ်တဲ့ အဆင့်အနိမ့်ဆုံး မျိုးနွယ်တစ်ခုပါ။ သူတို့ဟာ လပြည့်ညတွေမှာ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိူင်စွမ်း မရှိပဲ သမန်းဝံပုလွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီး အလွန်တရာ ဒေါသကြီးပြီး ရက်စက်တဲ့ သွေးဆာလောင်လာကြတာပါ။ နေ့ခင်းလူဖြစ်စဉ်က ခံစားချက်တွေ အားလုံးမေ့မျောပြီး မိမိကိုယ်ကို ထိန်းနိူင်စွမ်း မရှိသူတွေပါ။ လပြည့်ညပြီး နောက်တစ်မနက်မှာလည်း ညကမိမိအဖြစ်အပျက်တွေကို လုံးဝပြန်မှတ်မိခြင်းမရှိတော့ပဲ လူ့ဘဝအဖြစ် ရှေ့ဆက်နေတဲ့ အဆင့်အနိမ့်ဆုံး သမန်းဝံပုလွေ မျိုးတွေအဖြစ် သိရှိရပါတယ်။ထူးခြားချက်အနေနဲ့ ထိုမျိုးနွယ်တွေရဲ့ ကိုက်ဖြတ်ခြင်းခံရသူတွေဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူတို့မျိုးနွယ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားကြောင်း မှတ်သားနိူင်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် Werewolf တွေရဲ့ အမျိုးအစာတွေကို သိပြီးပြီဖြစ်လို့ သူတို့ရဲ့ သမိုင်းဇစ်မြစ်စတင်ရာ ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
Werewolf တွေရဲ့ ရာဇဝင်ဟာ ရှေးယခင်နှစ်ပေါင်း များစွာကနေ ယနေ့ထက်တိုင်အောင် အမျိုးမျိုးကွဲပြား နေခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် လူအများစုကတော့ Werewolf တွေဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Wisconsin ဒေသမှာနေထိုင် ကျက်စားခဲ့တဲ့ အမေရိကန် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Fox tribe ကနေ အစပြုခဲ့တာလို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီဒေသမှာ အမေရိကန် နတ်ဘုရားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ ဝီဇာကာချိ ဟာ လူတွေနဲ့ရောနှောပြီး မထင်မရှား နေထိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူ့ရဲ့အစွမ်းကတော့ သူဟာ သူ့စိတ်သဘောအလိုအတိုင်း လူကနေ ဝံပုလွေ, ဝံပုလွေကနေ လူအဖြစ်ပြောင်းနိူင်တဲ့ အစွမ်းရှိသူပါ။ ကျနော်အထက်က ဖော်ပြခဲ့သလိုဆို ‘Shapeshifter Wolf’ ပေါ့။ သူဟာ လူတွေနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ရောနှောနေထိုင်နေတဲ့ နတ်ဘုရားတစ်ပါးပါ။
တစ်နေ့တော့ သစ်တောအတွင်းမှာ Fox tribe က ညီအကိုနှစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ကီမီနဲ့ မက်ချိဟူး တို့ဟာ သမင်တစ်ကောင်ကို ဖမ်းမိလို့ အောင်ပွဲခံနေတာကို သူတွေ့လိုက်ပါတယ်။ သူဟာ သူတို့ ၂ ယောက်စိတ်ဓာတ်ကို စမ်းသပ်လိုတာနဲ့ သူတို့အနား ချည်းကပ်သွားပြီး သူဟာ လမ်းပျောက်ပြီး အစာရေစာ ငတ်ပြတ်နေတဲ့ အခြားမျိုးနွယ်စုက ဆိုပြီးသွားမိတ်ဆက်တော့ ကီမီ နဲ့ မက်ချိဟူး တို့ညီအကို ၂ ယောက်ဟာ သူ့ကို လောလောလတ်လတ် ဖမ်းမိထားတဲ့ သမင်အသား အနည်းငယ်ကို ပေးကမ်းခဲ့ပါတယ်။ နတ်ဘုရား ဝီဇာကာချိ ကလည်း ဝမ်းမြောက်စွာ လက်ခံခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ နောက်တစ်ပတ်ခန့် အကြာမှာ သူတို့ ၃ ယောက်တောထဲမှာ အမှတ်မထင် ပြန်ဆုံတွေ့ခဲ့ကြ တာပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ ကီမီ နဲ့ မက်ချိဟူး တို့ညီအကို ၂ ယောက်ဟာ သူတို့ အမဲမရတာ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က သမင်ရပြီး နောက်ထပ်မရတော့ကြောင်းနှင့် သူတို့အလွန်ဆာလောင်နေကြောင်း ဝီဇာကာချိ ကို ပြောပြပါတယ်။ နတ်ဘုရား ဝီဇာကာချိဟာ သူတို့ညီအကိုကို ပြန်လည်ကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ လူတွေကိုလုံးဝ အန္တရာယ်မပြုပဲ အမဲလိုက်ဖို့အတွက် သီးသန့်သာ အစွမ်းကို အသုံးပြုရမည့် အကြောင်းကိုကတိပေးခိုင်းပြီး ကီမီ နဲ့ မက်ချိဟူး ကို Shapeshifter Wolf အစွမ်းကို ပေးလိုက်ပါတယ်။
သူတို့ ညီအကို ၂ ယောက်ဟာ တစ်လခန့်အထိ သူတို့အစွမ်းကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီး Fox tribe တစ်မျိုးနွယ်စု လုံးအတွက် အမဲရှာဖွေ ပေးနိူင်ခဲ့တာပေါ့။ တစ်နေ့တော့ မက်ချိဟူးဟာ သူတို့မျိုးနွယ်စုထဲက ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ကတောက်ကဆဖြစ်ရာမှ ဒေါသမချုပ်တည်းနိူင်ပဲ သူ့ပင်ကိုယ်စိတ် မပါပဲ ဝံပုလွေအသွင် ပြောင်းသွားပြီး လက်လွန်ပြီး သတ်မိခဲ့တာပါ။ Fox tribe မျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးကလည်း ကြောက်လန့်ပြီး သူတို့ ညီအကို ၂ ယောက်ကို မျိုးနွယ်စုမှ နှင်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါ။
နတ်ဘုရား ဝီဇာကာချိ လည်းအလွန်အမင်း ဒေါသထွက်ပြီး ကတိချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ မက်ချိဟူးကို ကျိန်စာတိုက်ခဲ့ပါတယ်။ မက်ချိဟူးဟာ သူ့ရဲ့ စိတ်အလိုအတိုင်း ပြောင်းလည်းနိူင်စွမ်းမရှိတော့ တဲ့ သမန်းဝံပုလွေ (True Werewolf) ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့ သလိုဆို အဆင့်အနိမ့်ဆုံး တတိယမြောက် အမျိုးအစားပေါ့။ သူရဲ့အကို ကီမီဟာလုံး လပြည့်ညတွေဆို လုံးဝထိန်းချုပ်နိူင်စွမ်း မရှိတော့တယ့် သူ့ကို စွန့်ခွာခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ရာဇဝင်အရ မက်ချိဟူးဟာ မူလပထမ သမန်းဝံပုလွေ အဖြစ်လည်းကောင်း အခြားဆင့်ပွား သမန်းဝံပုလွေတွေရဲ့ ဖန်တီးသူဖခင်တစ်ပါးအဖြစ် လည်းကောင်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက် တွေဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ယုံတမ်းရာဇဝင်အဖြစ် ကျနော်တို့ကြား ပျံ့နှံ့နေခဲ့သော်လည်း ၁၉၃၆ ခုနှစ်မှာ ထိုရာဇဝင်စတင်ရာ Wisconsin ဒေသမှာ သမန်းဝံပုလွေကို ဒေသခံတွေ အမှတ်မထင် တွေ့ရှိမှုတွေ ရှိခဲ့တာကစပြီး အရာရာပြောင်းလဲ လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီသမန်းဝံပုလွေတွေဟာ ကျနော်တို့ လူသားတွေကြားထဲမှာ ပုန်းကွယ်နေထိုင် နေကြတာလား?
Wisconsin ဒေသမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေက သမန်းဝံပုလွေ မတော်တဆ တွေ့ရှိမှုတွေဟာ တိုက်ဆိုင်နေတာလား?
သူတို့တွေဟာ ကျနော်တို့ လူသားမျိုးနွယ်တွေ ကြားမှာဘယ်အချိန်အထိ ကိုယ်ဖျောက်နေထိုင် နေကြမှာလဲ?Werewolf တွေဟာ ယုံတမ်းရာဇဝင်တွေလား? ဒါမှမဟုတ် ကျနော်တို့ ကမ္ဘာမြေကြီးမှာ အမှန်တကယ် နေထိုက်ကျက်စား ခဲ့ကြတာလား?
ဆိုတာတွေ ကတော့ ဖြေရှင်းမရနိူင်သေးတဲ့ ပဟေဋိတစ်ပုဒ်အဖြစ် ကျန်ရှိနေအုန်းမှာ ဖြစ်ကြောင်း…….
Translated by #DrAung
Werewolf ဆိုတာ ဒဏ်ဍာရီ ထဲက ကွောကျမကျဖှယျအကောငျးဆုံး သတ်တဝါဆနျးတှထေဲမှာ တဈမြိုးအပါအဝငျ ဖွဈတာပါ။ သူတို့ဟာ အလှနျကွီးမားတဲ့ လူတဈပိုငျး ဝံပုလှတေဈပိုငျး သတ်တဝါဆနျးဖွဈပွီး သူတို့ရဲ့ ဒေါသကို ထိနျးခြုပျနိူငျစှမျး နညျးပါးတဲ့ မြိုးနှယျစုတဈခုပါ။ Werewolf တှကေို ပွငျသဈ, ဂြာမနီ အစရှိတဲ့ နိူငျငံတှအေပွငျ ကမ်ဘာ့နိူငျငံအနှံ့အပွားမှာ တှရှေိ့ဖူးကွတယျဆိုပွီး ပွောဆိုကွပမေယျ့ Werewolf တှဟော ကြေးလကျအမရေိကနျ ရိုးရာဒဏ်ဍာရီတှကေ ဆငျးသကျလာတာဆိုပွီး အယုံအကွညျ ရှိခဲ့ကွတာပါ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ရာစုနှဈတှကေ အမရေိကနျရဲ့ Wisconsin ပွညျနယျအတှငျး မှာ Werewolf တှကေို အမှတျမထငျ မွငျတှရေဲ့သူတှေ အမွောကျအမွား ရှိခဲ့တယျဆိုပွီး မှတျတမျးအရ သိရှိနိူငျပွီး ထိုဒသေဟာလညျး Werewolf တှရေဲ့ သမိုငျးစတငျရာ မွဖွေဈတယျဆိုပွီး အနောကျတိုငျးသားတှကေ တဈထဈခယြုံကွညျ နကွေပါတယျ။
“Werewolf ဘယျနှဈမြိုး ရှိတာလဲ?”
– Shapeshifter Wolf (အသှငျပွောငျး သမနျးဝံပုလှေ)
– Wolfman (လူတဈပိုငျး ဝံပုလှတေဈပိုငျး)
– True Werewolf (သမနျးဝံပုလှေ)
ဆိုပွီး ၃ မြိုးရှိပါတယျ။
(၁) အသှငျပွောငျး သမနျးဝံပုလှေ
– အဆငျ့အမွငျ့ဆုံး အမြိုးနှယျပါ။ သူတို့တှဟော လူအသှငျကနေ သမနျးဝံပုလှေ သို့ သမနျးဝံပုလှကေနပွေီး လူအဖွဈကို စိတျရှိတိုငျး ပွောငျးလဲနိူငျတဲ့ စှမျးအငျတှကေို ပိုငျဆိုငျထားသူတှပေါ။ ဒါပမေယျ့ အခြို့အခွအေနေ တှဖွေဈတဲ့ အလှနျအမငျး ပူဆှေးသောက ရောကျခွငျး ဒေါသခွငျးမြားရှိပါက မိမိစိတျထဲကမပါပဲ အလိုလို သမနျးဝံပုလှအေဖွဈ ပွောငျးလဲသှားနိူငျတဲ့ အားနညျးခကျြတဈခုတော့ ရှိပါတယျ။ ဒီ Shapeshifter Wolf အမြိုးအစားဟာ အခွားသူကို ကိုကျခွငျးဖွငျ့ အသှငျပွောငျး သမနျးဝံပုလှတေဈယောကျ ဖွဈမလာစေ နိူငျကွောငျး သတိပွုရမှာပါ။
(၂) လူတဈပိုငျး ဝံပုလှတေဈပိုငျး
– သူတို့အမြိုးအစားကတော့ လူတဈပိုငျး ဝံပုလှတေဈပိုငျး mutant ဖွဈနတေဲ့ ပုံစံပါ။ သူတို့ဟာ အမြားအားဖွငျ့ လူခန်ဓာကိုယျကို ပိုငျဆိုငျထားပမေယျ့ သူတို့မှာ အမှေးအမငျြ အလှနျထူထပျပွီး အစှယျတှေ, ခွသေညျးလကျသညျးတှေ ထှကျနလေရှေိ့တာပါ။ သူတို့အမြိုးအစားကတော့ ကြိနျစာတိုကျခံ ထားရတဲ့အမြိုးအစားပါ။ သူတို့ကတော့ လပွညျ့ညရောကျမှသာ သမနျးဝံပုလှအေဖွဈ လုံးဝပွောငျးလဲသှားတာပါ။ အခွားနေ့ တှမှောတော့ လူတဈပိုငျး ဝံပုလှတေဈပိုငျးအနနေဲ့ ကိုယျယောငျဖြောကျ နထေိုငျလရှေိ့တဲ့ အမြိုးအနှယျတှပေါ။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ လူဖွဈစဉျကအတိုငျး စိတျခံစားခကျြတှကေို ဝံပုလှအေဖွဈ ပွောငျးသှားတဲ့ လပွညျ့ညတှမှောတောငျ ထိနျးခြုပျနိူငျစှမျး ရှိသူတှပေါ။ လပွညျ့ညတှမှောပဲ အသှငျပွောငျးရာက အခွားညတှအေထိ ပွောငျးလဲမှု စိတျလာမညျဖွဈပွီး နောကျဆုံး လုံးဝလူ့အသှငျ ပွနျမပွောငျးတော့ပဲ လူဖွဈစဉျက ခံစားခကျြတှေ တဈဖွေးဖွေးပြောကျဆုံးသှားပွီး ခံစားခကျြမဲ့တဲ့ သမနျးဝံပုလှအေဖွဈ ထာဝရပွောငျးလဲ သှားမယျ့ အမြိုးအနှယျ တဈခုအဖွဈ သိနိူငျပါတယျ။
– သူတို့က Shapeshifter Wolf မှ ဆငျးသကျလာသူ တှပေါ။ ရာဇဝငျအရ Shaftshifter Wolf အခြို့ဟာ သူတို့ရဲ့ အခြိနျမရှေး ပွောငျးလဲနိူငျစှမျးနဲ့ လူ့အသိစိတျနှငျ့ ထိနျးခြုပျနိူငျမှု တှကေို ပြောကျဆုံးစတေဲ့ ကြိနျစာတိုကျခံရပွီး ဖွဈပျေါလာတဲ့ ဆငျ့ပှားဖွဈပျေါတဲ့ အဆငျ့အနိမျ့ဆုံး မြိုးနှယျတဈခုပါ။ သူတို့ဟာ လပွညျ့ညတှမှော မိမိကိုယျကို ထိနျးခြုပျနိူငျစှမျး မရှိပဲ သမနျးဝံပုလှအေဖွဈ ပွောငျးလဲသှားပွီး အလှနျတရာ ဒေါသကွီးပွီး ရကျစကျတဲ့ သှေးဆာလောငျလာကွတာပါ။ နခေ့ငျးလူဖွဈစဉျက ခံစားခကျြတှေ အားလုံးမမြေ့ောပွီး မိမိကိုယျကို ထိနျးနိူငျစှမျး မရှိသူတှပေါ။ လပွညျ့ညပွီး နောကျတဈမနကျမှာလညျး ညကမိမိအဖွဈအပကျြတှကေို လုံးဝပွနျမှတျမိခွငျးမရှိတော့ပဲ လူ့ဘဝအဖွဈ ရှဆေ့ကျနတေဲ့ အဆငျ့အနိမျ့ဆုံး သမနျးဝံပုလှေ မြိုးတှအေဖွဈ သိရှိရပါတယျ။ထူးခွားခကျြအနနေဲ့ ထိုမြိုးနှယျတှရေဲ့ ကိုကျဖွတျခွငျးခံရသူတှဟော တဈဖွညျးဖွညျးနဲ့ သူတို့မြိုးနှယျအဖွဈ ပွောငျးလဲသှားကွောငျး မှတျသားနိူငျပါတယျ။
ဒီလောကျဆိုရငျ Werewolf တှရေဲ့ အမြိုးအစာတှကေို သိပွီးပွီဖွဈလို့ သူတို့ရဲ့ သမိုငျးဇဈမွဈစတငျရာ ကိုဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ။
Werewolf တှရေဲ့ ရာဇဝငျဟာ ရှေးယခငျနှဈပေါငျး မြားစှာကနေ ယနထေ့ကျတိုငျအောငျ အမြိုးမြိုးကှဲပွား နခေဲ့တာပါ။ ဒါပမေယျ့ လူအမြားစုကတော့ Werewolf တှဟော အမရေိကနျပွညျထောငျစု Wisconsin ဒသေမှာနထေိုငျ ကကျြစားခဲ့တဲ့ အမရေိကနျ တိုငျးရငျးသား လူမြိုးစု တဈခုဖွဈတဲ့ The Fox tribe ကနေ အစပွုခဲ့တာလို့ ယုံကွညျကွပါတယျ။
အဲ့ဒီဒသေမှာ အမရေိကနျ နတျဘုရားတဈပါးဖွဈတဲ့ ဝီဇာကာခြိ ဟာ လူတှနေဲ့ရောနှောပွီး မထငျမရှား နထေိုငျခဲ့ဖူးပါတယျ။ သူ့ရဲ့အစှမျးကတော့ သူဟာ သူ့စိတျသဘောအလိုအတိုငျး လူကနေ ဝံပုလှေ, ဝံပုလှကေနေ လူအဖွဈပွောငျးနိူငျတဲ့ အစှမျးရှိသူပါ။ ကနြျောအထကျက ဖျောပွခဲ့သလိုဆို ‘Shapeshifter Wolf’ ပေါ့။ သူဟာ လူတှနေဲ့ ခငျမငျရငျးနှီးစှာ ရောနှောနထေိုငျနတေဲ့ နတျဘုရားတဈပါးပါ။
တဈနတေ့ော့ သဈတောအတှငျးမှာ Fox tribe က ညီအကိုနှဈယောကျ ဖွဈတဲ့ ကီမီနဲ့ မကျခြိဟူး တို့ဟာ သမငျတဈကောငျကို ဖမျးမိလို့ အောငျပှဲခံနတောကို သူတှလေို့ကျပါတယျ။ သူဟာ သူတို့ ၂ ယောကျစိတျဓာတျကို စမျးသပျလိုတာနဲ့ သူတို့အနား ခညျြးကပျသှားပွီး သူဟာ လမျးပြောကျပွီး အစာရစော ငတျပွတျနတေဲ့ အခွားမြိုးနှယျစုက ဆိုပွီးသှားမိတျဆကျတော့ ကီမီ နဲ့ မကျခြိဟူး တို့ညီအကို ၂ ယောကျဟာ သူ့ကို လောလောလတျလတျ ဖမျးမိထားတဲ့ သမငျအသား အနညျးငယျကို ပေးကမျးခဲ့ပါတယျ။ နတျဘုရား ဝီဇာကာခြိ ကလညျး ဝမျးမွောကျစှာ လကျခံခဲ့ပါတယျ။
ဒီလိုနဲ့ နောကျတဈပတျခနျ့ အကွာမှာ သူတို့ ၃ ယောကျတောထဲမှာ အမှတျမထငျ ပွနျဆုံတှခေဲ့ကွ တာပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ ကီမီ နဲ့ မကျခြိဟူး တို့ညီအကို ၂ ယောကျဟာ သူတို့ အမဲမရတာ ဟိုးလှနျခဲ့တဲ့ တဈပတျက သမငျရပွီး နောကျထပျမရတော့ကွောငျးနှငျ့ သူတို့အလှနျဆာလောငျနကွေောငျး ဝီဇာကာခြိ ကို ပွောပွပါတယျ။ နတျဘုရား ဝီဇာကာခြိဟာ သူတို့ညီအကိုကို ပွနျလညျကြေးဇူးဆပျတဲ့အနနေဲ့ လူတှကေိုလုံးဝ အန်တရာယျမပွုပဲ အမဲလိုကျဖို့အတှကျ သီးသနျ့သာ အစှမျးကို အသုံးပွုရမညျ့ အကွောငျးကိုကတိပေးခိုငျးပွီး ကီမီ နဲ့ မကျခြိဟူး ကို Shapeshifter Wolf အစှမျးကို ပေးလိုကျပါတယျ။
သူတို့ ညီအကို ၂ ယောကျဟာ တဈလခနျ့အထိ သူတို့အစှမျးကို အကြိုးရှိရှိအသုံးခပြွီး Fox tribe တဈမြိုးနှယျစု လုံးအတှကျ အမဲရှာဖှေ ပေးနိူငျခဲ့တာပေါ့။ တဈနတေ့ော့ မကျခြိဟူးဟာ သူတို့မြိုးနှယျစုထဲက ကောငျလေးတဈယောကျနဲ့ ကတောကျကဆဖွဈရာမှ ဒေါသမခြုပျတညျးနိူငျပဲ သူ့ပငျကိုယျစိတျ မပါပဲ ဝံပုလှအေသှငျ ပွောငျးသှားပွီး လကျလှနျပွီး သတျမိခဲ့တာပါ။ Fox tribe မြိုးနှယျစုတဈခုလုံးကလညျး ကွောကျလနျ့ပွီး သူတို့ ညီအကို ၂ ယောကျကို မြိုးနှယျစုမှ နှငျထုတျခဲ့ကွတာပါ။
နတျဘုရား ဝီဇာကာခြိ လညျးအလှနျအမငျး ဒေါသထှကျပွီး ကတိခြိုးဖောကျခဲ့တဲ့ မကျခြိဟူးကို ကြိနျစာတိုကျခဲ့ပါတယျ။ မကျခြိဟူးဟာ သူ့ရဲ့ စိတျအလိုအတိုငျး ပွောငျးလညျးနိူငျစှမျးမရှိတော့ တဲ့ သမနျးဝံပုလှေ (True Werewolf) ဖွဈလာခဲ့ပါတော့တယျ။ အထကျမှာဖျောပွခဲ့ သလိုဆို အဆငျ့အနိမျ့ဆုံး တတိယမွောကျ အမြိုးအစားပေါ့။ သူရဲ့အကို ကီမီဟာလုံး လပွညျ့ညတှဆေို လုံးဝထိနျးခြုပျနိူငျစှမျး မရှိတော့တယျ့ သူ့ကို စှနျ့ခှာခဲ့ပါတော့တယျ။ ဒီလိုနဲ့ ရာဇဝငျအရ မကျခြိဟူးဟာ မူလပထမ သမနျးဝံပုလှေ အဖွဈလညျးကောငျး အခွားဆငျ့ပှား သမနျးဝံပုလှတှေရေဲ့ ဖနျတီးသူဖခငျတဈပါးအဖွဈ လညျးကောငျး ဖွဈလာခဲ့ပါတော့တယျ။
ဒီအဖွဈအပကျြ တှဟော နှဈပေါငျးမြားစှာတိုငျအောငျ ယုံတမျးရာဇဝငျအဖွဈ ကနြျောတို့ကွား ပြံ့နှံ့နခေဲ့သျောလညျး ၁၉၃၆ ခုနှဈမှာ ထိုရာဇဝငျစတငျရာ Wisconsin ဒသေမှာ သမနျးဝံပုလှကေို ဒသေခံတှေ အမှတျမထငျ တှရှေိ့မှုတှေ ရှိခဲ့တာကစပွီး အရာရာပွောငျးလဲ လာခဲ့ပါတယျ။
ဒီသမနျးဝံပုလှတှေဟော ကနြျောတို့ လူသားတှကွေားထဲမှာ ပုနျးကှယျနထေိုငျ နကွေတာလား?
Wisconsin ဒသေမှာ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈတှကေ သမနျးဝံပုလှေ မတျောတဆ တှရှေိ့မှုတှဟော တိုကျဆိုငျနတောလား?
သူတို့တှဟော ကနြျောတို့ လူသားမြိုးနှယျတှေ ကွားမှာဘယျအခြိနျအထိ ကိုယျဖြောကျနထေိုငျ နကွေမှာလဲ?Werewolf တှဟော ယုံတမျးရာဇဝငျတှလေား? ဒါမှမဟုတျ ကနြျောတို့ ကမ်ဘာမွကွေီးမှာ အမှနျတကယျ နထေိုကျကကျြစား ခဲ့ကွတာလား?
ဆိုတာတှေ ကတော့ ဖွရှေငျးမရနိူငျသေးတဲ့ ပဟဋေိတဈပုဒျအဖွဈ ကနျြရှိနအေုနျးမှာ ဖွဈကွောငျး…….
Posted in Amazing, History, KnowledgeTagged amazing, knowledge, werewolf
Previous post အင်္ဂလိပ်တို့သိမ်းယူသွားပြီးနောက် ပျောက်ဆုံးသွားသော ရွှေရထား
Next post သေဆုံးသွားတဲ့ သခင့်အုတ်ဂူအနီးမှာ ၁၀နှစ်ကျော် မခွဲမခွာနေခဲ့သူ (သို့) အစွဲအလန်းကြီး သစ္စာကြီးလွန်းတဲ့ခွေးကလေး